မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ အဘယ်နည်း ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ အဘယ်နည်း ?
Posted by manawphyulay on May 8, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 12 comments
အခုရေးထားတာတွေကိုထောက်ခံပါတယ်ဗျာ များများသာရေးပေးပါအနည်းနဲ. အများတော.ပြင်ဆင်ကြမှာသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ.လေးပြောပြမယ်နော်ထည်. လည်းရေးလို.ရတာပေါ. အွန်လိုင်းကကောင်မလေးပါ ၀တ်ထားတာရိုင်းလို.အဲလိုမ၀တ်ပါနဲ.မြန်မာဆိုမြန်မာလိုဝတ်ပါလို.ကွန်မန်.ပေးထားလိုက်တယ်နောက်ကျတော. သူပြန်ပြောတာသူများကိုလိုက်ဝေဖန်နေတာမရှက်ဘူးလားတဲ. ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းလည်းနည်းတယ်ရီလည်းရီချင်တယ်သိလား
ဒီစာလေးဟာ ရည်ရွယ်ချက် စေတနာ တင်ပြပုံ သိတ်ကောင်းပါတယ်။
ကျနော်လည်းပြောပါရစေ… ကျနော်တို့လူမျိုးတွေပာာ အင်မတန်အတုခိုးတတ်ပါတယ်..ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံးစံကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကို အသုံးမချတတ်ကြပါဘူး….သူများလုပ်သလိုလိုက်လုပ် သူများစားသလိုလိုက်စားတာဘာကြောင့်မှန်းမသ်ိပါ…ကျနော်တို့လူမျိုးပာာတိုင်းတပါးကိုလည်းသိပ်အထင်ကြီးတတ်ကြပါတယ်..
ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ရင်သတိထားမိတာရှိပါတယ်..သူတို့ပာာ သူတို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုနေတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတာ မရောက်ဖူးလို့မသိပေမဲ့ သူတို့ဇာတ်ကားတွေမှာတော့ ကမ္ဘာက သူတို့ကိုမြင်စေချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ ရိုက်ပြတတ်ကြပါတယ်..သူတို့ ဘာတွေစားတယ်..ဘယ်လိုနေတယ်..စိတ်ထားဘယ်လိုရှိတယ်..ဘယ်လိုဝတ်ကြတယ် လိမ်းချယ်ပြင်ဆင် ကြတယ်ဆိုတာကအစ အားလုံးကို သတိထားပြီးရိုက်ပြနေကြတာပါ..သူတို့တိုင်းပြည်အတွက် Marketing သဘောပါပဲ..တိုင်းပြည်နဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ကုန်တွေကို ဒီလိုကြော်ငြာတာပါ..သူတ်ို့ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဈေးကွက်ကိုလွယ် လွယ် လေးထိုးဖေါက်သွားပါတယ်..ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ သူတို့ လို ကမ္ဘာကိုတင်ပြနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်.. ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတာဝန်ရှိတာက မိမိတိုင်းပြည် မိမိယဉ်ကျေးမှုကို အထင်မသေးဖို့ လေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ကြဖို့ပါပဲ…ကျနော်ပြည်ပကို သွားနေခဲ့ဖူးပါတယ်..နေရထိုင်ရတာ အခက်အခဲမ၇ှိပြည့်စုံပေမဲ့ သူတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်သလို.လှပသလို..စည်းကမ်း၇ှိကြသလို..လူအချင်းချင်းတန်ဖိုးထား ဆက်ဆံ တတ် ကြသလို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ဖြစ်ထွန်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်နေပါတယ်.. ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်ပြန်ရောက်တော့မှ ဒါငါ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်သလိုနွေးထွေးတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့ရတာပါ…
တိုင်းပြည် အဆင့်မှီလာဖို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပစ်တင်နေလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး..နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုတနိုင်ယူကြဖို့ပဲလိုပါတယ်.. ကျနော်တို့ရဲ့လာမဲ့မျိုးဆက်တွေ မိဝေးဖဝေးပြည်ပမှာ ပညာသွားမသင်ရအောင်..တိုင်းတပါးမှာပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်တွေသွားမလုပ်ရတော့အောင်..မိသားစုတွေတကွဲတပြားမနေကြရတော့အောင် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်၇ဲ့အနာဂါတ်ကိုကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံးဖန်တီး တည်ဆောက် သွားချင်ပါတယ်…မိန်းခလေးရောယောင်္ကျားလေးတွေမှာပါ တာဝန်ရှိပါတယ်….
ဟုတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ရှိတာက ကိုရီးယားကားတွေကိုပဲ ပြမယ့်အစား မြန်မာမှာ မြန်မာကောင်းကောင်းတွေကို များများပြသပြီး ကမ္ဘာကို ဖြန့်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်နော် သိလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုရီးယားက မင်းသားမင်းသမီးတွေ မြန်မာပြည်လာတော့ မြန်မာကားတွေလေ့လာဖို့ သူတို့ဆီမှာ မရှိဘူးလို့ ပြောသံကြောင့် အတော်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ သူများအရိပ်တွေ လွှမ်းမိုးနေပြီး နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာကားမရောက်ဖူးဆိုတော့ အတော်ကို တိုးတက်မှု ရှိနေတာကို တွေ့ရတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာရိုးရာဓလေ့ ဒါတွေကို မြန်မာပြည်တွင်းမှာတောင် အတော်မီးမောင်းထိုးပြရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်..တရုတ်ကား After Shock ကိုကြည့်ကြည့်ပါ ငလျင်လှုပ်တာကိုရိုက်ပြတာက Effect တွေကိုထားပါတော့… သရုပ်ဆောင်တွေသရုပ်ဆောင်တာ သိပ်ကိုသဘာဝကျလွန်းတာပါ..မင်းသားမင်းသမီးဆိုပြီးပာန်ရေးပြမနေပဲ..သရုပ်ဆောင်ပီပီသသနဲ့ တကယ့်ကိုသဘာဝကျကျ လုပ်ပြသွားတာပါ…နည်းပညာကိုအပစ်ပုံချဖို့ထက် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို ပီပီပြင်ပြင် စေတနာပါပါ လုပ်ပြရင်ကောင်းမှာပါ..ဒါမှလည်းပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှာပါ..နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖေါက်နိုင်မှာပါ….မြန်မာကားတွေပာာ သရုပ်ဆောင်တာတွေသာမက ဆက်တင်ပိုင်းကပါ မြန်မာမဆန်ချင်ပါဘူး …အတုခိုးတာတွေသိပ်များပါတယ်..မင်းသားမင်းသမီး မနက်စာစားပြရင်လည်း တကယ်အပြင်ကပြည်သူတွေစားသလိုကိုစားမပြနိုင်ပါဘူး ..ဘိုစာတွေပဲစားပြပါတယ်..ကော်ဖီ နဲ့ မုန့် နဲ့စသဖြင့်ပေါ့အပြင်မှာအဲလိုစားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်.ဒါပေမဲ့.မြန်မာရုပ်ရှင်ဖြစ်လို့.မြန်မာ့လူနေမှုပုံစံအမှန်ကိုထင်ပာပ်ဖို့လိုပါတယ်…….
အရမ်းကို ဖြစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ။
Rဇာနည်ရဲ့ သနပ်ခါးချစ်သူ သီချင်းလေးကို နားဆင်ကြည့်ပါ။ အဲလို သီချင်းလေးတွေများများပေါ်လာရင်၊ ပေါက်ရင် ကောင်းမှာပဲ။
ကျွန်တော်ကတော အဂတိ ကင်းစွာနဲ့ ဆွေးနွေးရရင်
အမှန်တရားအတွက် အသက်ကိုစွန့်တိုက်ပွဲဝင်ကြသောမြင်းစီးသမား ၂ယောက်
တစ်ယောက်က တောင်အရပ်မှလာ၍ အခြားတယောက်က မြောက်အရပ်မှလာကြသည်
ရပ်နားရန်အတွက် လမ်းဘေးဆိုင်ရှေ့တွင် ရပ်ကြလေသည်
ထိုဆိုင်ရှေ့တွင် မြင်းရုပ်တရုတ် ရှိဧ် ထိုမြင်းရုတ်ကို
မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ငွေရောင်သုတ်ထား သည်
တောင်ဘက်ခြမ်းမှမြင်းစီးသမားက တယ်လှတဲ့ ရွှေ ရောင်
ငါကလည်းအမှန်တရားအတွက် အသက်ပင် စတေးနိုင်ကြောင်း
ရွှေမြင်းရုပ်ကို ငွေမြင်းရုပ်ဟု မပြောနိုင်ကြောင်းဆိုကာ
အဖော် အချွတ် မိန်းကလေးများကလည်း နာမည်ကြီးလို၍ ပိုက်ဆံရလို၍
sponser ရလို၍ လူသိများလို၍ ပုရိသအကြိုက်
မိမိရဲ့  အရင်းအမြစ်များ resourcesကို အားသာချက်အဖြစ်
အသုံးပြုကာ တခြား ရုပ်ချောသော ချစ်စရာကောင်းသော အသံကောင်းသော
အရင်းအမြစ် resource ပိုင်ရှင်းများနှင့် တန်းတူယှဉ်ပြုင်လိုကြသည်
ထိုသိုမလုပ်လျှင် ရည်းစားcase နာမည်ကြီးမှု Sponser ပုရိသကြိုက်မှု
အမြဲတမ်း ရုပ်ချောသောကောင်မလေးများသာ နေရာယူနေပေလိမ့်မည်
ပုရိသတွေကလည်း ပုထုစဉ်တွေ ဆိုတော့ တဏှာလောဘဘယ်ကင်းနိုင်မယ်
ကြည်ရုံတင်မက စိတ်ထဲပါရင်ပါသလို sponser ထွက်လာတာ
ဒီ case ကိုလည်း ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး လိုသွားမပြောရဲဘူး
– မိမိကိုဖြစ်စေ သုတပါးကိုဖြစ်စေမထိခိုက်သောအလုပ်သည်
# မကောင်းမှု အကုသိုလ်
– မိမိကိုဖြစ်စေ သုတပါးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်သောအလုပ်သည်
အဖေါ်အချွတ်ဝတ်တာ မိမိကိုဖြစ်စေ သုတပါးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်လားမထိခိုက်
လား ထိခိုက်ရင်လည်း ဘယ်လိုထိခိုက်သလဲ
Miss ပြိုင်ပွဲတွေကို.. မြန်မာတွေဘယ်လိုမြင်ကြသလည်း… သိချင်သား..
အနောက်နိုင်ငံသားတွေဘယ်လိုမြင်သလည်း.. သိချင်လား.. ??
ကျနော် ရွာထဲ မရောက်ခင်ကတည်းက တင်ထားတဲ့ပိုစ့်လေးပဲ
အခုမှ တူးဖော်ပေးသူကြောင့် ဖတ်မိတယ်။
မှန်ကန်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းရှိမှ ပြေလည်မယ့် ပြသနာမျိုးပါ။ ဒီမှန်ကန်စွာတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း အရင်းစစ်လိုက်တော့ ပညာရေးအားကောင်းဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်လို့ မြန်မာဝတ်စုံကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လျှပ်ပေါ်လော်လီမှုမဟုတ်တဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းကန်ကို Jean ဖင်ကျပ်နဲ့ သွားဖို့ မသင့်တော်သလို သွက်သွက်လက်လက် လှုပ်ရှားသွားလာဖို့လိုတဲ့ အလုပ်ခွင်တွေမှာလည်း မြန်မာလုံချည်ဝတ်ဆင်ခြင်းက အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ မြန်မာ့ချည်ထည်တွေဟာ နွေရာသီမှာဝတ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာ ၇ှိပေမယ့် မိုးရာသီမှာ ချည်ထည်ဝမ်းဆက်ဝတ်ပြီး မိုးရေစိုလို့ တကိုယ်လုံးကပ်ပြီး အမြင်မတော်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကိုလည်း တွေ့ဘူးပါတယ်။ အလှူ မဂလာဆောင်ပွဲထိုင်မှာတော့ မြန်မာ့ချိတ်က အင်မတန်ကို ကျက်သရေရှိပါတယ်။